Trump wuxuu buuxinyaa booska banaan ee Maxkamadda Sare ugu dambeyn Sabtida! - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Trump wuxuu buuxinyaa booska banaan ee Maxkamadda Sare ugu dambeyn Sabtida!
Trump wuxuu buuxinyaa booska banaan ee Maxkamadda Sare ugu dambeyn Sabtida!
Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg arrives discusses the Supreme Court?s recent term in a lecture to first year students at the Georgetown University Law Center, on September 26, 2018 in Washington, D.C. Photo by Kevin Dietsch/UPI (Newscom TagID: upiphotostwo627632.jpg) [Photo via Newscom]
Muqdisho ( Walwaal online) – Madaxweyne Donald Trump ayaa gucle orod ugu jira sidii uu aqlabiyada Maxkamadda Sare ee Mareykanka xisbigiisu u yeelan lahaa ka hor doorashadii Nov. 3, Trump wuxuu warfidiyeenka u sheegay in uu qorsheynayo buuxiyo xilkii ay banaysay Ruth Bader Ginsburg.
Dimoqraadiyiinta rajadoodii ahayd in kursigaasi banaanaado ayaa soo gudhay ka gadaal markii labada senator ee Jamhuuriga ah, Chuck Grassley iyo Cory Gardner, ay muujiyeen taageeradooda ku aaddan in dhaqso loo buuxiyo booska bannaan.
Trump oo warfidiyeenka kula hadlay Aqalka Cad, ayaa sheegay inuu hal ama laba musharax ka soo qaadan doono shanta qof ee u sharaxan booska, Wuxuu ugu yeedhay golaha guurtida, oo ay gacanta ku hayaan saaxiibadiisa Jamhuuriyiintu, inay u codeeyaan qofka uu horkeeno inta ka horaysa wakhtiga doorashada.
“Waxa aan aad u door bidayaa inaynu buuxino booska ka hor doorashada, waayo waxa aynu haysanaa wakhti aynu hawshaa ku qaban karo” .
Laba garsoore oo ka tirsan maxkamadda racfaanka federaalka ee uu magacaabay Trump ayaa ah kuwa ugu cadcad ee safka hore kaga jira in loo magacaabo jagadaa waa na Amy Coney Barrett oo ka timid Chicago kana hawl gasha Maxkamadda Rafcaanka Mareykanka ee 7aad iyo Barbara Lagoa oo ka timaada Atlanta kana hawl gasha Maxkamadda Rafcaanka Mareykanka ee 11aad. Trump ayaa Barrett kula kulmay Aqalka Cad Isniintii, sida laga soo xigtay ilo xog ogaal u ah xaaladda.
Ginsburg waxay jimcihii u dhimatay kansarka beeryarada iyadoo 87 gu tirsatay.
Bedelka booskeeda Trump wuxuu qorshaynayaa inay dhacdo ka hor xabaalida Ginsburg oo lagu wado in si gaar ah loogu aaso qabuuraha Qaranka Arlington usbuuca soo socda.
Saraakiisha ayaa diyaariyey in dadweynuhu ku daawado meydkeeda banaanka maxkamada sare Arbacada iyo Khamiista iyo gudaha dhismaha Capitol-ka Jimcaha.
Geerida Ginsburg waxay siineysaa Trump iyo xisbigiisa fursad ay ku dhisaan aqlabiyad waayo 6 xubnood waxay noqon doonaan jamhuuri halka 3 keliyi demoqraadi ka noqon doonaan taasoo saamayn balaadhan ku yeelan doonta maxkamada go’aamadeeda sida ilmo iska soo ridka, daryeelka caafimaadka, xuquuqda haysashada qoriga, marin u helida codeynta, awoodaha madaxweynaha iyo ciqaabta dilka.
Jamhuuriyiintu waxa ay haystaan 53 xubnood aqalka odayaasha halka 47 ay ka haystaan dimuqraadiyiintu, waxay barkaa dimuqraadiyiintu u baahan yihiin inay helaan 4 xubnood oo dhankooda soo mara si ay u joojiyaan in booskaa si dhakhso ah loo buuxiyo.
Previous articleSheekofaneedda Cusub Ee Carabta Iyo Midabtakoorka Madowga (qaybta 2aad)
Next articleWuxuu doonay inuu wiil helo, ka dib 5 gabdhood markii laysugu xejiyey
DAAWO: Donald Trump oo sabab u noqday in ilaalo gaar ah loo sameeyo dhakhtarkii ugu waynaa Maraykanka.
(Daawo)”Degdeg uga baxa!” – Wefdi ka socdey Imaaraadka oo laga soo eryey Masjidka Al-Aqsa.